‘गीत संगीत मानिसको अभिन्न साथी हो’ -कला राई - Naya Online
शनिबार, साउन ३०, २०७८ (August 14th, 2021 at 8:15am ) अन्तर्वार्ता, ग्लामर न्युज
गायिका कला राईको नेपाली संगीतमा छुट्टै पहिचान छ । लोकआधुनिक गायनमा चर्चा कमाएकी राईले ‘ए नि लै लै, छोरीको जीवन उडाई लान्छ रेलले’ बोलको गीतबाट आफ्नो गायन यात्रा सुरुआत गरेकी थिइन् । गायिका कला राई, ०५७ सालको देशव्यापी लोक गीत प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल गायिका हुन् । ०६३ सालको देशव्यापी आधुनिक गीत प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हात पारेकी उनी ‘ब्राइटर तिम्रो सुर मेरो गीत’मा समेत दोस्रो भएकी थिइन् । उनको ‘कला’, ‘अफर’, ‘लुक्स’ र ‘इसारा’ एल्बम बजारमा आइसकेको छ । अहिले कारोना कहरले देश विदेशको सांँगीतिक कार्यक्रमहरू ठप्प जस्तै भएको मौका छोपी उनै गायिक कला राईसँग ‘नयाँ साहित्य’ले गरेको कुराकानीको बेलिबिस्तार ।
हिजोआज दिनहरू के कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ ?
हिजोआज खास बिशेष छैन । कोभिड १९ को कारण अरु बेलाजस्तो गीत संगीतको कामहरू हुन पाएको छैन । यस्तै छ ।
यो महामारीले गीत संगीतलाई के कस्तो असर पारेको छ ?
कोभिड १९ ले गीत संगीतमा निक्कै असर पुर्‍याएको छ । हामी गायक गायिकाहरूलाई जति कार्यक्रमहरू भयो उति राम्रो सिर्जनाका हिसाबले पनि अर्को कुरा आयआर्जनको पाटोले पनि । कोभिडको कारण कार्यक्रमहरू ठप्प छ । देश तथा विदेशको सांगीतिक टुरहरू हुन पाएको छैन । आाफुले तयार गरेको गीतहरू पनि समयमा रेकर्ड गर्न पाइएको छैन । यसरी गीत संगीतलाई यो महामारीले निक्कै असर पुर्‍याएको छ ।
तपाईँका तत्कालै कुनै गीतहरू बजारमा आउँदैछ कि ?
मेरो नयाँ एल्बमका गीतहरू तुरुन्तै आउन अलि समय लाग्छ नै । तर अरुको एल्बममा गीतहरू गाउने क्रम चैँ छँदैछ । जो बजारमा चाँडै आउनेवाला छन् ।
तपाईँ आफूलाई कस्तो खाले गीतहरूमा खुलेको पाउनुहुन्छ ?
मैले सबै प्याटर्नको गीतहरू गाउने गरेको छु । तर म विशेष लोकआधुनिक गीतमा आफूलाई खुलेको पाउँछु ।
तपाईँको प्रायः लोक गीतहरू सुनिन्छ वा हेरिन्छ । लोकगीत गाउनुमा त्यस्तो आनन्द के छ ?
तपाईँले ठीक भन्नु भयो । मैले धेरै लोकगीतहरू गाएको छु । म लोकगीत गायन प्रतियोगितामा प्रथम भएकोले होला जे जतिले मलाई चिन्नुहुन्छ वहाँहरूले लोकगीत नै दिने गर्नुहुन्छ । त्यसो त मैले आधुनिक गीतहरू पनि प्रशस्तै गाएको छु । आधुनिक गायन प्रतियोगितामा दोश्रो पनि भएको हुँ । त्यसैले आधुनिक गीतहरू गीतकारहरूले दिने गर्नुहुन्छ । आनन्दको त कुरै नगरौँ, गीत संगीत आफैमा आनन्द हो ।
योसँगै जोड्न मन लाागेको कुरो चैँ नि, प्राय तपाइँको गीतहरूमा पाश्चात्य संगीतको फ्युजन पाइन्छ, त्यो बिना हाम्रो लोक गीत तयार गर्न सकिन्न र ?
मैले मेरो केही गीतहरूमा फ्युजन गरेको छु । लोकगीत फ्युजनहरू बिना बन्न नसक्ने हैन तर हाम्रा दर्शक तथा श्रोताहरू संगीतको नयाँ स्वाद लिन चाहन्छन् । ती श्रोताहरूको निम्ति त्यसो गरिएको हो । तर सबैमा फ्युजन गरेकी छैन ।
कला राईलाई याद छ ? आफू गायिका बन्छु भन्ने सोच बनाएको ?
म गायिका नै बन्छु भनेर लागेको थिइनँ । तर म सानैबाट गाउने र नाच्ने गर्थेँ । रहरै रहरमा प्रतियोगितामा म सहभागी भएँ । सौभाग्यवस् प्रतियोगिता सफल बन्दै म गीत संगीतमा होमिएँ ।
यो दुनियाँमा संगीत आवश्यक छ ? किन ?
गीत संगीत दुःख सुख साटासाट गर्ने सबैभन्दा नजिकको साथी हो । तपाईँ हामी खुशी हुँदा नि गीत नै गाउँछौँ, दुःखी हुँदा त झनै गीतको सहारा लिएर मन बुझाउँछौँ । त्यसैले गीत संगीतको मानिसको अभिन्न साथी हो ।
नेपाली संगीतमा कलाकारहरूले सन्तोष गर्ने ठाउँ के कति छ ?
गीत संगीतमा सन्तोषको कुरा कलाकारको मिहेनत, धैर्यता, लगावमा भर पर्छ । आम्दानी अनुसार रम्न सके सन्तुष्ट हुने ठाउँ प्रशस्तै छ ।
तपाईँको भावी योजना के छ ?
नयाँ एल्बम ‘निशाना’ चाँडै आउँनेछ । जस्को काम भैरहकेको जानकारी गराउँन चाहन्छु ।
तपाईँ सम्पुर्णको साथ, सहयोग, सल्लाह र सुझावले नै गर्दा नै म यहाँ छु । आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको साथ र सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।